ပြောင်းဖူးကြိတ်စက်ပြောင်းဖူးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်,ဂျုံ,မြေပဲ, ဆန်နှင့်ပဲပုပ်,ငရုတ်ကောင်း,နံ့သာမျိုး,နှင့်ခြောက်သွေ့သောသီးနှံအညှာ, ဝါဂွမ်းထင်း, ဆန်ကောက်ရိုး, Clover, မြေပဲခွံ, ဆန်ခွံစသည်တို့ကိုထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများ၏နောက်ဆုံးအရွယ်အစားကိုဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်သည်. ဒီစီးရီးဒီဇယ်ပြောင်းကြိတ်စက်ကို fulll-steel ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်,ပြောင်းဖူးကြိတ်စက်၏အပိုအစိတ်အပိုင်းသည်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောပစ္စည်းများကိုလုံးဝအသုံးပြုသည်, ပြည်တွင်းအကောင်းဆုံး products.This ပြောင်းအမှုကြိတ်စက်ချမှတ်ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများဒီပြောင်းဖူးကြိတ်စက်ဘောင်ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ် ,ဘီးများကိုသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ .be ကင်ညာနိုင်ငံတွင်ဒီဇယ်အမျိုးအစားပြောင်းပြောင်း grinder စက်ရှိသည်,နှင့်အချို့သောဖောက်သည်များကဒီဒီဇယ်ပြောင်းပြောင်းကြိတ်စက်ကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားကြသည်,ထိုကဲ့သို့သောဆီနီဂေါအဖြစ် ,ဂမ်ဘီယာ,မာလီ,Burkina Faso,Sierra Leone,ဂါနာ,နိုင်ဂျီးရီးယားစသည်တို့.
1.ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းဖူးကြိတ်စက်အမျိုးအစားကိုအမျိုးမျိုးသောအညှာအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုသည်, ဝါဂွမ်းထင်း, ဆန်ကောက်ရိုး, Clover, မြေပဲခွံ, ဆန်ခွံဝါဂွမ်းမျိုးစေ့သားမွေး, စသည်တို့.
2 ပြောင်းဖူးကြိတ်စက်၏ဤစီးရီးများသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏အားသာချက်ဖြစ်သည်, ခိုင်ခံ့ခြင်းနှင့်အကြမ်းခံ, စိတ်ချရသော, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး,အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေ .
3 ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုပြောင်းဖူးကြိတ်စက်, မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု. ပစ္စည်းချိတ်ဆက်ရန်နှစ်ဆဥတုအပေါက်နှင့်အတူ.
ပြောင်းဖူးကြိတ်စက်သည်သက်ရောက်မှုကိုခံယူသည်, သံတူ၏မြန်နှုန်းမြင့်လှည့်ပြီးနောက်ကြိတ်ခွဲခန်းထဲသို့ပစ္စည်းကြေမွနေသည်, အချောထုတ်ကုန်ကွက်၏အရွယ်အစားထက်သေးငယ်သည်, အမှုန့်ကိုမှုတ်မှုတ်တံမှထုတ်ပေးလေထုစီးဆင်းမှု.
ဒီပြောင်းဖူးကြိတ်စက်ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် ,ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး အတွက်သံမဏိစပါးကြိတ်စက်ကိုပြုလုပ်ထားသည်.
ပြောင်းဖူးကြိတ်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို